NEWS – Page 695 – DigitalTimes
JBL က သူတု့ိရဲ့ ဆူညံသံတွေအားလုံးကို ဖယ်ရှားဖြတ်တောက်ပေးမယ့် Everest Elite 100 ဆိုတဲ့ Bluetooth ကြိုးမဲ့နားကျပ်တစ်မျိုးကို CES 2016 မှာမိတ်ဆက်ပြသသွားပါတယ်။ JBL Everest…
ချစ်ပ်ပြား ထုတ်လုပ်မှု တွေအပြီးမှာ Intel ကုမ္မဏီဟာ ပျံသန်းကိရိယာတွေနဲ့ စက်ရုပ်တွေဘက်ကို ဦးတည်လာပြန်ပါတယ်။ အဂါၤနေ့က လတ်စ်ဗီးဂတ်စ် မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Consumer Electronics Show(CES) ပွဲတော်အပြီးမှာ…
Phase One အမှတ်တံဆိပ် XF 100MP ကင်မရာဟာ ပြိုင်ဘက် ကင်မရာ အားလုံးထက်သာလွန်သွားခဲ့ပါပြီ။ ယနေ့ခေတ် နည်းပညာ ကန့်သတ်မှုတွေအားလုံး ကို ကျော်လွန်သွားခဲ့တဲ့ ဒီ ကင်မရာဟာ…
PS4 ဂိမ်းစက် အရေအတွက် ၃၅.၉ သန်း ကို တင်ပို့ရောင်းချပြီးကြောင်း Sony ကြေညာ
၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ အကုန် တွက်ချက်မှုများအရ Sony ကုမ္မဏီဟာ သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ် ဂိမ်းစက်ဖြစ်တဲ့ PlayStation4(PS4) ဂိမ်းစက်အရေအတွက်ပေါင်း သန်း ၃၀ ကျော်ကို…
မတ်လက စတင်ပြီး Twitter မှာ Tweet တွေကို စာလုံးရေ ၂၀၀၀ အထိ ရေးနိုင်တော့မည်
သင်ရေးတဲ့ Tweet တွေဟာ သိပ်တိုတောင်းလွန်းလို့ အာရုံနောက်နေရပါသလား? Twitter ရဲ့ ကာလကြာရှည် ကောလာဟလ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရှည်လျားတဲ့ Tweet တွေရေးခွင့်ရဖို့ဟာ မတ်လ အဆုံးမှာ…
HUBS Microsoft NEWS
Windows 10 မိုဘိုင်းလ် စနစ်ကို ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့မှာ တရားဝင်ထုတ်လုပ်ဖွယ်ရှိ
Microsoft ရဲ့ Windows ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Lumia ဟန်းဆက်ပိုင်ရှင်တွေဟာ Windows 8.1 စနစ်နဲ့ သူတို့ ဖုန်းတွေမှာ တိုင်ပတ်နေတာ ကြာခဲ့ပါပြီ။ အဲဒါကြောင့်…
အိမ်တွင်းသုံးရန် ဉာဏ်ရည်တု စက်ရုပ်တစ်မျိုးတည်ဆောက်မယ့် Zuckerberg
Facebook တည်ထောင်သူ Mark Zuckerberg က သူ့အိမ်တွင်းကအလုပ်တွေခိုင်းစေဖို့ Artificial Intelligence (AI) လို့ခေါ်တဲ့ ဉာဏ်ရည်တု စက်ရုပ်တစ်မျိုးကို တည်ဆောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်၊ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်မှာ တင်ခဲ့တဲ့…
အိမ်တွင်းရှိ စမတ်ကိရိယာ အားလုံးကို ထိန်းချုပ်နိုင်မယ့် စမတ် ရီမုဒ်
သင့်အနေနဲ့ တီဗွီ ရီမုဒ် တစ်ခု ကို မီးသီးတွေကို ချိန်ရွယ်ပြီး ထိုမီးသီး ပိတ်သွားအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ အခိုက်အတန့် မျိုး ကို စိတ်ကူးယဉ်ဖူးပါသလား? အခုလက်တွေ့မှာတော့…
COC ဂိမ်းထုတ်လုပ်တဲ့ Supercell မှ ထပ်မံထုတ်လုပ်မယ့် မိုဘိုင်းလ်ဂိမ်း – Clash Royale
Clash of Clans ဂိမ်းကို တီထွင်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Supercell က COC ရဲ့နောက်မှာ Clash Royale ဆိုတဲ့ဂိမ်းသစ်တစ်မျိုးကို ထပ်မံထုတ်လုပ်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီဂိမ်းဟာ…